Ingiriiska oo Baxreyn ka furtay Saldhiggii Militari ee u horreeyay tan iyo 1971kii – Kasmo Newspaper
Ingiriiska oo Baxreyn ka furtay Saldhiggii Militari ee u horreeyay tan iyo 1971kii
Updated - April 7, 2018 2:22 pm GMT
London (Kasmo ), Dalka Britain ayaa Saldhig Militari oo joogto ah ka samaystay Baxreyn, kaas oo ah midkii u horreeyay oo Bariga Dhexe uu ku yeesho ilaa sannadkii 1971kii, lana daahfuray maalintii Khamiista, 5tii April 2018.
Furitaanka Saldhigga oo ku yaalla bariga ‘Suez canal’ wuxuu ku soo beegmayaa maalmo yar uun ka dib markii Baxreyn laga helay keydkii shidaal ee ugu weynaa dalkaas. ‘ Uk Naval Support Facility’ wuxuu qaadi karaa ilaa 500 oo ka tirsan Ciidanka Badda Uk oo isugu jira askar, badmaaxyo iyo duuliyeyaal.
Taliye Steve Dainton ayaa ujeeddada Uk ku tilmaamay sidii mar kasta goob joog ugu ahaan lahayd sugidda ammaanka badda ee Gobolka, si looga hor tago burcad-badeedda iyo argagixisada. Saldhiggu wuxuu Britain u sahli doonaa daadihinta tabarro dabrid military ah oo Gobolka iyo gacan siinta maraakiibta dhanka sahayda (logistics) iyo farsamada (Engineering).
Britain waxay Saldhiggeedii Militari ee u horreeyay Baxreyn ka dhisatay sannadkii 1935kii, kaas oo ku wareegay gacanta Maraykanka, markii Baxreyn ka xorowday Uk sannadkii 1971kii. In dib loo furo Saldhiggaan waxaa lagu dhawaaqay sannadkii 2014,laakiin hawlaha dhismihiisu waxay bilowdeen sannadkii 2015kii.
Baxreyn oo dhacda xeebaha Sacuudi Carabiya kuna began galbeedka Iiraan waxay fariisin u tahay oo marti galisaa Raxanta 5aad ee Ciidammada Badda Maraykanka. Iiraan iyo Maraykanka waxaa marar badan ku dhexmara isku dhacyo biyaha Gacanka Persia iyo agagaarka Marinka Hormuz ee Khaliijka ku xira Badweynta India, halkaas oo uu maro 1/3 shidaalka dunidu.
Dhanka kale xiriirka Baxreyn iyo Iiraan ma ahan mid wanaagsan, iyada oo midka hore u badantahay Shiicadu, laakiin sunno tiro yari haysato xukunka, kuwaas oo u arka Iiraan in ay fadqalallo joogto ah ku hayso. Iiraan qudheeda waxay xukunka qoyska reer Khaliifa ee Baxreyn u aragtaa mid sharci darro ah, dad badanina waxayba u haystaan Baxreyn in ay tahay Gobol ka mid ah Iiraan.